Imigaqo nemiqathango -Iipompo zasekhitshini, iipompu zokugcwalisa imbiza, iibhobho zokuhlambela | WOWOW
Iipompo zasekhitshini, iipompu zokugcwalisa imbiza, iibhobho zokuphefumla | | WOWOW
Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela
Iimpompo zoSink eziLawulayo eziFihliweyo
Ikhaya / Imimmiselo nemiqathango
Le webhusayithi iqhutywa liqela www.wowowfaucet.com. Kuyo yonke le webhusayithi, amagama athi "thina", "thina" kunye no "wethu" abhekisa kwiqela www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com inikezela le webhusayithi, kubandakanya lonke ulwazi, izixhobo kunye neenkonzo ezifumanekayo kule ndawo kuwe, msebenzisi, ezimiselweyo ngokwamkelwa kwayo yonke imigaqo, imiqathango, imigaqo-nkqubo kunye nezaziso ezichazwe apha.
Ngokundwendwela indawo yethu kunye / okanye uthenge into kuthi, ubandakanyeka "kwiNkonzo" yethu kwaye uyavuma ukuba ubotshelelwe yile migaqo nemiqathango ("IMIMISELO NEMIQATHANGO", "iMiqathango"), kubandakanya loo migaqo, iimeko kunye nemigaqo-nkqubo eyongezelelweyo. Isalathiso apha kunye / okanye sifumaneke ngesixhumanisi. Le MIGAQO NEMIQATHANGO isebenza kubo bonke abasebenzisi bendawo, kubandakanywa ngaphandle komda abasebenzisi abakhangeli, abathengisi, abathengi, abathengisi, kunye / okanye abanikeli bomxholo.
Nceda ufunde le MIGAQO NEMIQATHANGO ngononophelo ngaphambi kokungena okanye ukusebenzisa iwebhusayithi yethu. Ngokungena okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yale ndawo, uyavuma ukuba ubotshelelwe yile MIMISELO NEMIQATHANGO. Ukuba awuvumelani nayo yonke imigaqo nemiqathango yesi sivumelwano, awunakufikelela kwiwebhusayithi okanye usebenzise naziphi na iinkonzo. Ukuba le MIGAQO NEMIQATHANGO ithathwa njengesithembiso, ukwamkelwa kucacisiwe kule MIMISELO NEMIQATHANGO.
Naziphi na izinto ezintsha okanye izixhobo ezongezwe kwivenkile yangoku ziya kuxhomekeka KWIMIMISELO NEMIQATHANGO. Ungajonga olona hlobo langoku lweMIGAQO NEMIQATHANGO nangaliphi na ixesha kweli phepha. Sinelungelo lokuhlaziya, lokutshintsha okanye lokutshintsha nayiphi na indawo yale MIMISELO NEMIQATHANGO ngokuthumela uhlaziyo kunye / okanye utshintsho kwiwebhusayithi yethu. Luxanduva lwakho ukujonga eli phepha amaxesha ngamaxesha ukuze litshintshe. Ukuqhubeka kokusebenzisa okanye ukufikelela kwiwebhusayithi emva kokuthunyelwa kwalo naluphi na utshintsho kubandakanya ukwamkelwa kolo tshintsho.
ICANDELO 1 - IMIGAQO YOKUGCINA I-ONLINE
Ngokuvuma le MIGAQO NEMIQATHANGO, awunakusebenzisa iimveliso zethu kuyo nayiphi na injongo engekho mthethweni okanye engagunyaziswanga, kwaye wena, ekusebenziseni iNkonzo, wophula nayiphi na imithetho kulawulo lwakho (kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwimithetho yelungelo lokushicilela).
Akufanele uhambise nayiphi na iimbungu okanye ii-virus okanye nayiphina impawu yendalo ewonakalisayo.
Ukuphulwa okanye ukwephula nayiphi na iMigqaliselo iya kubangela ukupheliswa kweNkonzo zakho ngokukhawuleza.
ICANDELO 2 - IIMEKO NGOKUBANZI
Sigcina ilungelo lokuncedisa inkonzo kunoma ngubani na isizathu nangaliphi na ixesha.
Uyaqonda ukuba umxholo wakho (ungabandakanyi ulwazi lwekhadi lesikweletu), unokutshintshwa ungachangeki kwaye uquka (a) ukuthunyelwa kwiinkonzo ezahlukeneyo; Kwaye (b) utshintsho ukuhambelana nokulungelelanisa neemfuno zobuchwepheshe bokuxhuma amanethiwekhi okanye izixhobo. Ulwazi lwekhadi lokuthenga ngetyala luhlala lubhalwe ngokubhaliweyo ngexesha lokudluliselwa kwiinqununu.
Uyavuma ukuba ungazalisi, uphinde uphinde ukopike, uthengise, uthengise okanye usebenzise nayiphi na inxenye yeNkonzo, ukusetyenziswa kweNkonzo, okanye ukufikelela kwiNkonzo okanye nayiphi na inxibelelwano kwiwebhusayithi ekunikezelwa kuyo inkonzo, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo .
Izihloko ezisetyenziswe kwesi sivumelwano zibandakanya ukulungelelana kuphela kwaye aziyi kuphelisa okanye zichaphazele ezinye iziMiselo.
ICANDELO 3 - UKUCHANEKA, UKUGQIBELELA NOKUFUMANA AMAXESHA OLWAZI
Asinalo uxanduva ukuba ulwazi olwenziwe kule ndawo aluchanekanga, lupheleleyo okanye lukhoyo. Izinto ezikule ndawo zinikezelwa ngolwazi oluqhelekileyo kuphela kwaye akufanele zithembeke okanye zisetyenziswe njengesiseko sodwa sokwenza izigqibo ngaphandle kokubonisana nezibonelelo eziprayimari, ezichanekileyo, ezipheleleyo okanye ezingaphezulu ngexesha elide. Naluphi na ukuthembela kwizinto ezikule ndawo kusemngciphekweni wakho.
Le ndawo ingaba neenkcukacha ezithile zembali. Ulwazi lwembali, ngokuqinisekileyo, alukho okwangoku kwaye lubonelelwa ngerejista yakho kuphela. Sigcina ilungelo lokuguqula isiqulatho sesi sihlandlo nanini na, kodwa asiyibopheleleko yokuhlaziya nayiphi na ingcaciso kwiziko lethu. Uyavuma ukuba ngumsebenzi wakho ukubeka iliso utshintsho kwiziko lethu.
ICANDELO 4 -UHLELO KWINKONZO NAMAXABISO
Ixabiso leemveliso zethu ziya kutshintsha ngaphandle kwesaziso.
Sigcina ilungelo nangaliphi na ixesha ukuguqula okanye ukuyeka iNkonzo (okanye nayiphi na inxalenye okanye umxholo wayo) ngaphandle kwesaziso nanini na.
Asiyi kuba noxanduva kuwe okanye nakwaphi na umntu wesithathu kunoma yikuphi ukuguqulwa, utshintsho lwamanani, ukumiswa okanye ukuyeka ukusebenza kweNkonzo.
ICANDELO 5 - IMVELISO OKANYE IINKONZO (ukuba kufanelekile)
Iimveliso ezithile okanye iinkonzo zinokufumaneka kuphela kwi-intanethi kwiwebhusayithi. Ezi mveliso okanye iinkonzo zinokuba nexabiso elincinci kwaye ziya kubuyiselwa okanye zitshintshwe kuphela ngokwemigaqo yethu yokubuyisela.
Senze yonke imizamo yokubonisa ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo imibala kunye nemifanekiso yeemveliso zethu ezibonakala evenkileni. Asinakuqinisekisa ukuba ukubekwa kweliso kwikhompyuter yakho nawuphi na umbala kuya kuchaneka.
Sigcina ilungelo, kodwa asiyibophelelo, ukunciphisa ukuthengiswa kweemveliso okanye iinkonzo zethu kunoma yimuphi umntu, ummandla wendawo okanye igunya. Singawusebenzisa eli lungelo kwiimeko-nge-zizathu. Siyalondoloza ilungelo lokunciphisa ubungakanani bemveliso okanye iinkonzo esizinikelayo. Yonke inkcazo yemveliso okanye intengo yemveliso iya kutshintshwa nanini na ixesha ngaphandle kwesaziso, kwintetho yedwa. Sigcina ilungelo lokuyeka nayiphi na imveliso nanini na. Nasiphi na isibonelelo semveliso okanye inkonzo eyenziwe kule ndawo ayikho nto apho kungavunyelwe khona.
Asikuvumeli ukuba umgangatho weemveliso, iinkonzo, ulwazi, okanye ezinye izinto ezithengiweyo okanye ezifunyenwe nguwe ziya kuhlangabezana nezilindelekileyo, okanye ukuba nayiphina impazamo kwiNkonzo iya kulungiswa.
ICANDELO 6-UKUFANELEKA KOKUBHALWA KWEENKCUKACHA NEENKCUKACHA ZE-AKHAWUNTI
Sigcina ilungelo lokulahla nayiphi na umyalelo obekayo nathi. Sinokuthi, ngokwengqiqo yethu kuphela, sinciphise okanye sikhoxise inani elithengiweyo ngomntu ngamnye, nganye kwikhaya okanye ngomyalelo. Ezi zithintelo zingabandakanya iilawulwe zibekwe okanye phantsi kwekhawunti enye yamakhasimende, enye ikhadi lekhredithi, kunye / okanye i-oda ezisebenzisa enye idilesi yokuthengisa kunye / okanye yokuthumela. Kwimeko apho senza utshintsho okanye sikhoxise umyalelo, sinokuzama ukukwazisa ngokuqhagamshelana ne-imeyile kunye / okanye idilesi yebhidi / inombolo yefowuni enikezwe ngexesha lo myalelo wenziwe. Siyalondoloza ilungelo lokunciphisa okanye ukuvimbela iilawulisi, ezikuphela kweso sigwebo, zibonakala zibekwe ngabadayisi, abathengisi okanye abahambisa.
Uyavuma ukubonelela ngolwazi olukhoyo, olupheleleyo kunye oluchanekileyo kunye nolwazi lwe-akhawunti yazo zonke izinto ezithengiweyo esitolo sethu. Uyavuma ukuhlaziya ngokukhawuleza i-akhawunti yakho kunye nolunye ulwazi, kuquka idilesi yakho ye-imeyile kunye namanani ekhadi lesikweletu kunye nemihla yokuphelelwa yisikhathi, ukuze sikwazi ukugqiba ukuthengiselana kwakho kunye nokuqhagamshelana nawe njengoko kuyimfuneko.
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, nceda ubuyekeze iNkqubo yethu yokubuyisela
ICANDELO 7 - IZIXHOBO ZOKHETHO
Sinokukunika ukufikelela kwizixhobo zenkampani yesithathu apho singakhange sibheke okanye singenakho ukulawula okanye negalelo.
Uyavuma kwaye uyavuma ukuba sinikezela ukufikelela kwezixhobo ezifana "kunye" kwaye "zikhoyo" ngaphandle kwanoma yimaphi imirhumo, iimpawu okanye iimeko zaluphi na uhlobo kwaye zingenayo imvume. Asiyi kuba nexanduva naluphi na oluvela okanye oluphathelele ekusebenziseni kwakho izixhobo zokuzikhethela ezithathu.
Nakuphi na ukusetyenziswa ngawe kwezixhobo ezikhethiweyo ezinikezelwa kwisayithi ngokupheleleyo kusemngciphekweni wakho kunye nokuqonda kwaye kufuneka uqinisekise ukuba uyazi kwaye uyayivuma imigaqo apho izixhobo ezibonelelwa ngumniki-nkonzo (third party party).
Kananjalo, kwixesha elizayo, sinokunikezela ngeenkonzo ezintsha kunye / okanye amanqaku kwiwebhusayithi (kubandakanya, ukukhutshwa kwezixhobo ezitsha kunye nezixhobo). Ezi zinto zintsha kunye / okanye iinkonzo ziya kuba phantsi kwale MIMISELO NEMIQATHANGO.
ICANDELO 8 - UQHAGAMSHELWANO LWESITHATHU-NAMAQELA
Umxholo othile, iimveliso kunye neenkonzo ezikhoyo ngeNkonzo yethu zingabandakanya izinto ezisuka kumalungu amathathu.
Izixhumanisi zenkampani yesithathu kule ndawo zingakuqondisa kwiiwebhusayithi ze-third party ezingabambisene nathi. Asinaso uxanduva lokuhlola okanye ukuvavanya umxholo okanye ukuchaneka kwaye asiyi kuvuma kwaye ayiyi kuba nayiphi na uxanduva okanye uxanduva lwazo naziphi na izinto zenkampani yesithathu okanye iiwebhsayithi, okanye nayiphi na enye impahla, iimveliso, okanye iinkonzo zamanye amaqela.
Asinaxanduva lwayo nayiphi na ingozi okanye umonakalo onxulumene nokuthengwa okanye ukusetyenziswa kweempahla, iinkonzo, izixhobo, umxholo, okanye nakuphi na okunye okwenziweyo okunxulumene nayo nayiphi na iwebhusayithi yomntu wesithathu. Nceda uphonononge ngononophelo imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zomntu wesithathu kwaye uqiniseke ukuba uyaziqonda ngaphambi kokuba wenze nayiphi na intengiselwano. Izikhalazo, amabango, iinkxalabo, okanye imibuzo malunga neemveliso zomntu wesithathu kufuneka zithunyelwe kwiqela lesithathu.
ICANDELO 9 - AMAVANDLAKANYA ABASEBENZISIWEYO, INGXELO NENYE IINKONZO
Ukuba, ngesicelo sethu, uthumela ukungeniswa okuthile okuthe ngqo (umzekelo ungeniso kukhuphiswano) okanye ngaphandle kwesicelo esivela kuthi uthumela izimvo zoyilo, iingcebiso, izindululo, izicwangciso, okanye ezinye izinto, nokuba zikwi-intanethi, nge-imeyile, ngeposi yeposi, okanye ngenye indlela. (ngokudibeneyo, 'amagqabantshintshi'), uyavuma ukuba nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwesithintelo, ukuhlela, ukukopa, ukupapasha, ukuhambisa, ukuguqulela nokunye ukusebenzisa nakuphi na okuphakathi naziphi na izimvo osithumela zona. Asinyanzelekanga (1) ukugcina naziphi na izimvo ngokuzithemba; (2) ukuhlawula imbuyekezo ngazo naziphi na izimvo; okanye (3) ukuphendula kuzo naziphi na izimvo.
Singanakho, kodwa singabi nasibophelelo sokubeka iliso, ukuhlela okanye ukususa umxholo esiwugqibe ngokubona kwethu ukuba akukho semthethweni, kuyacaphukisa, kuyasongela, kuyanyelisa, kuyanyelisa, iphonografi, amanyala okanye enye into echasayo okanye ephula naliphi na ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye le MIMISELO NEMIQATHANGO .
Uyavuma ukuba amazwana akho awayikuphulaphula nayiphi na ilungelo lalo naluphi na umntu wesithathu, kuquka ne-copyright, uphawu lokuthengisa, ubumfihlo, ubuntu okanye elinye ilungelo lomntu okanye ilungelo. Uyavuma kwakhona ukuba izimvo zakho aziyi kuqukumbela okanye zingekho mthethweni, zixhaphaze okanye zikhohlakele okanye ziqulethe nayiphi na intsholongwane yekhompyutha okanye enye i-malware engayichaphazela nayiphi indlela ukusebenza kweNkonzo okanye nayiphi na i-website ehambelana nayo. Awukwazi ukusebenzisa idilesi ye-imeyile yamanga, uzenza ngathi ungomnye ngaphandle kwakho, okanye mhlawumbi ukhohlise okanye amaqela asithathu malunga nemvelaphi yazo naziphi na izimvo. Unembopheleleko yedwa naziphi na izimvo ozenzayo kunye nokuchaneka kwazo. Asiyi kuthatha uxanduva kwaye asiyi kuthatha uxanduva malunga naliphi na izimvo ezithunyelwe nguwe okanye nawuphi na umntu wesithathu.
ICANDELO 10 - IINKCUKACHA ZAKHO
Ukungeniswa kolwazi lwakho lomntu kwi-venkile kulawulwa nguMgaqo-nkqubo Wobumfihlo.
ICANDELO 11 - IZIPHOSO, UKUNGACACI NEZIPHUMO
Ngamanye amaxesha kunokuba lunolwazi kwiziko lethu okanye kwiNkonzo equlethe iiphoso ze-typographical, ukungacaciswanga okanye ukuchithwa okungahambelana nokuchazwa kwemveliso, intengo, ukukhushulwa, ukunikezelwa, iintlawulo zokuthunyelwa kwemveliso, ixesha lokuhamba nokufumaneka. Sigcina ilungelo lokulungisa nayiphina impazamo, ukungalungi okanye ukushiya, nokutshintsha okanye ukuhlaziya ulwazi okanye ukukhansela imiyalelo ukuba nayiphi na inkcazelo kwiNkonzo okanye nakweyiphi na idibanisayithi ehambelanisiweyo ayilunganga naliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso sangaphambili (kubandakanywa emva kokuba uthumele umyalelo wakho) .
Asiyikuzibophezela ukuba sihlaziywe, sichibiyele okanye sichaze ulwazi kwiNkonzo okanye nakweyiphi i-website echaphazelekayo, kubandakanya ngaphandle kokunciphisa, ulwazi oluthile lwexabiso, ngaphandle kokufunwa ngumthetho. Akukho mbuyekezo ecacisiweyo okanye usuku lokuvuselela olusetyenziswa kwiNkonzo okanye nakweyiphi i-website echaphazelekayo, kufuneka ithathwe ukuba ibonise ukuba zonke iinkcukacha kwiNkonzo okanye nakweyiphi na iwebhusayithi edibeneyo iguquliwe okanye ihlaziywe.
ICANDELO 12 - UKUSETYENZISWA KWENKQUBO
Ukongeza kwezinye izithintelo njengoko kubekiwe KWIMIMISELO NEMIQATHANGO, akuvumelekanga ukusebenzisa le ndawo okanye umxholo wayo: (a) ngazo naziphi na iinjongo ezingekho mthethweni; (b) ukucenga abanye abantu ukuba benze okanye bathathe inxaxheba kwizenzo ezingekho mthethweni; (c) ukophula nayiphi na imigaqo-nkqubo yamazwe aphesheya okanye yase-UK, imigaqo, imithetho, okanye imigaqo yendawo; (d) ukophula okanye ukunyhasha amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye; (e) ukuhlukumeza, ukuphatha gadalala, ukuthuka, ukwenzakalisa, ukunyelisa, ukugculela, ukoyikisa, okanye ukucalucalula ngokusekelwe kwisini, inkanuko yesini, inkolo, ubuhlanga, ubuhlanga, ubudala, imvelaphi yesizwe, okanye ukukhubazeka; (f) ukungenisa ulwazi olungeyonyani okanye olulahlekisayo; (g) ukufaka okanye ukuhambisa iintsholongwane okanye naluphi na uhlobo lwekhowudi enobungozi eya kuthi okanye isetyenziswe nangayiphi na indlela eya kuchaphazela ukusebenza kweNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi enxulumene nayo, ezinye iiwebhusayithi, okanye i-Intanethi; (h) ukuqokelela okanye ukulandelela iinkcukacha zabanye; (i) ku-spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, okanye scrape; (j) ngayo nayiphi na into engamanyala okanye yokuziphatha kakubi okanye (k) ukuphazamisa okanye ukuthintela amanqaku okhuseleko eNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi enxulumene nayo, ezinye iiwebhusayithi, okanye i-Intanethi. Sinelungelo lokuphelisa ukusebenzisa kwakho iNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi enxulumene nokwaphula nayiphi na into engavunyelwanga.
ICANDELO 13 - UKUKHANGELWA KWEZIQINISEKISO; Umda woxanduva
Asiqinisekisi, simele okanye siqinisekise ukuba ukusetyenziswa kwakho kwenkonzo kuya kuphazamiseka, ngexesha elifanelekileyo, elikhuselekile okanye elingenasiphelo.
Asikuvumeli ukuba iziphumo ezinokufumaneka kwiinkonzo ziya kuchaneka okanye zithembeke.
Uyavuma ukuba ngezikhathi ezithile singasusa inkonzo kwixesha elingenammiselo okanye ukucima inkonzo nganoma naliphi ixesha, ngaphandle kwesaziso kuwe.
Uyavuma ngokucacileyo ukuba ukusebenzisa kwakho, okanye ukungakwazi ukusebenzisa, le nkonzo kumngcipheko wakho kuphela. Inkonzo kunye nazo zonke iimveliso kunye neenkonzo eziziswe kuwe ngenkonzo (ngaphandle kokuba kuchaziwe) kuthi zinikezelwe 'njengoko zinjalo' kwaye 'zifumaneka' ukuze uzisebenzise, ​​ngaphandle kokumelwa, iiwaranti okanye iimeko zalo naluphi na uhlobo, nokuba zichaza okanye kuchaziweyo, kubandakanya zonke iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokurhweba, umgangatho wokuthengisa, ukulungela injongo ethile, ukuhlala ixesha elide, isihloko kunye nokungaphuli mthetho.
Akukho mzekelo kuthi thina, abalawuli bethu, amagosa, abasebenzi, amaqumrhu, abaxhasi, abakontraki, abaqeqeshi, abaqeqeshi, ababoneleli, abanikezeli-nkonzo okanye abalayisenisi bahlawuliswa naliphi na ukulimala, ukulahleka, ibango, okanye nayiphi na into ngqo, engahambelaniyo, ngokukhawuleza, isigwebo, umonakalo ofanelekileyo wobuphi na uhlobo, kubandakanywa, ngaphandle kokunciphisa inzuzo elahlekileyo, ukulahlekelwa kweengeniso, ukugcinwa kwemali, ukulahlekelwa kwedatha, iindleko zokutshintsha, okanye nayiphi na umonakalo ofanayo, nokuba isekwemvumelwano, inkohlakalo (kuquka ukunyaniseka), uxanduva oluqinileyo okanye ukusetyenziswa kwanoma iyiphi inkonzo okanye nayiphi na imikhiqizo ethengiweyo isebenzisa isevisi, okanye nayiphi na enye ibango ehambelana naluphi na indlela ekusetyenzisweni kwakho kwenkonzo okanye nayiphina imveliso, kuquka, kodwa ingagqithwanga kuyo, naziphi na iimpazamo okanye ukushiya kuyo nayiphi na into, okanye nayiphina ukulahleka okanye umonakalo woluphi uhlobo olwenziweyo ngenxa yokusetyenziswa kwenkonzo okanye nayiphi na into (okanye imveliso) ithunyelwe, idluliselwa, okanye yenziwe enye ngeenkonzo, nangona ikwacetyiswa ukuba kungenzeka. Kungenxa yokuba abanye bathi okanye iimbambano azivumeli ukukhutshwa okanye ukukhawulelwa kweemfanelo ezilungeleyo okanye ezibangelwa yimimiselo, kwiimeko ezinjalo okanye kumagunya, uxanduva lwethu luya kufikelela kumlinganiselo ophezulu ovunyelwe ngumthetho.
ICANDELO 14 - UKUBONISWA
Uyavuma ukusihlawulela, ukusikhusela kwaye usibambe singenabungozi thina nabazali bethu, iinkxaso-mali, abo sinxulumana nabo, amaqabane, amagosa, abalawuli, iiarhente, iikontraki, abaniki layisenisi, ababoneleli beenkonzo, oosomashishini abancinci, abathengisi, abafundi abasafundayo kunye nabasebenzi, abangenabungozi kulo naliphi na ibango okanye ibango, kubandakanya nengqiqo. Imirhumo yamagqwetha, enziwe nanguwuphi na umntu wesithathu ngenxa okanye yokwaphula kwakho le MIQATHANGO NEMIQATHANGO okanye amaxwebhu abandakanya ukubhekisa kuwo, okanye ukwaphula kwakho nawuphi na umthetho okanye amalungelo eqela lesithathu.
ICANDELO 15 - UKUQINISEKA
Kwimeko apho naliphi na ulungiselelo lwale MIGAQO NEMIQATHANGO ligqityiwe ukuba alikho mthethweni, alusebenzi okanye alunakunyanzeliswa, loo malungiselelo aya kuthi anyanzeliswe ngokupheleleyo kangangoko kuvunyelwe ngumthetho osebenzayo, kwaye isahlulo esingenakunyanzeliswa siya kuthathwa njengesikhutshwe kule MIGAQO KUNYE IMIQATHANGO, ukuzimisela okunjalo akuyi kuchaphazela ukunyaniseka nokunyanzeliswa kwayo nayiphi na eminye imiqathango eseleyo.
ICANDELO 16 - UKUYEKA
Iimbopheleleko kunye namatyala amacandelo athathwe phambi komhla wokuphela kuya kusinda ekupheleni kwesi sivumelwano kuzo zonke iinjongo.
Le MIGAQO NEMIQATHANGO iyasebenza ngaphandle kokuba ide ipheliswe nguwe okanye sithi. Ungayiphelisa le MIMISELO NEMIQATHANGO nangaliphi na ixesha ngokusazisa ukuba awusafuni ukusebenzisa iiNkonzo zethu, okanye xa uyeka ukusebenzisa indawo yethu.
Ukuba kwisigqibo sethu sodwa uyasilela, okanye sikrokrela ukuba usilele, ukuthobela naliphi na ixesha okanye ulungiselelo lwale MIMISELO NEMIQATHANGO, nathi singasiphelisa esi sivumelwano nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso kwaye uya kuhlala unoxanduva kuzo zonke izixa ukuya kubandakanya umhla wokupheliswa; kwaye / okanye ngokufanelekileyo unokukuyekisa ukufikelela kwiiNkonzo zethu (okanye nayiphi na inxalenye yazo).
ICANDELO 17 - ISIVUMELWANO SONKE
Ukusilela kwethu ekusebenziseni okanye ekunyanzeliseni naliphi na ilungelo okanye ukubonelelwa kwale MIQATHANGO NEMIQATHANGO akuyi kwenza unikezelo lwelo lungelo.
Le MIGAQO NEMIQATHANGO kunye nayo nayiphi na imigaqo-nkqubo okanye imigaqo yokusebenza eposwe sithi kule ndawo okanye ngokubhekisele kwiNkonzo yenza isivumelwano sonke kunye nokuqonda phakathi kwakho nathi kwaye silawule ukusebenzisa kwakho iNkonzo, sithathe indawo yazo naziphi na izivumelwano zangaphambili okanye ezenziwayo, unxibelelwano kunye nezindululo. , nokuba kungomlomo okanye kubhaliwe, phakathi kwakho nathi (kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, naziphi na iinguqulelo zangaphambili zeMIGAQO NEMIQATHANGO).
Nakuphi na ukungaqondakali ekutolikeni kwale MIGAQO NEMIQATHANGO akuyi kuthathwa ngokuchasene neqela eliyiliweyo.
ICANDELO 18 - UMTHETHO OLAWULAYO
Le MIGAQO NEMIQATHANGO kunye nazo naziphi na izivumelwano ezahlukileyo ekubonelela ngazo ngeeNkonzo ziya kulawulwa kwaye zithatyathwe ngokwemithetho yase-UK.
ICANDELO 19 - UTSHINTSHO KWIMIMISELO NEMIQATHANGO
Ungajonga olona hlobo langoku lweMIGAQO NEMIQATHANGO nangaliphi na ixesha kweli phepha.
Sinelungelo, ngokokubona kwethu, ukuhlaziya, ukutshintsha okanye ukubuyisela nayiphi na indawo yale MIMISELO NEMIQATHANGO ngokuthumela uhlaziyo kunye notshintsho kwiwebhusayithi yethu. Luxanduva lwakho ukujonga iwebsite yethu rhoqo. Ukuqhubeka kokusebenzisa okanye ukufikelela kwiwebhusayithi yethu okanye kwiNkonzo elandela ukuthunyelwa kwalo naluphi na utshintsho kule MIGAQO NEMIQATHANGO kukwamkela olo tshintsho.
Ukongeza iwaranti yeenyanga ezintandathu